Guva hariende kunookwa masikati asi kuti kuseniseni.
Makuva haarohwe evanhu vaviri musi mumwechete.
Munhu haavigwe pachivanzi padyo nemba yamunogara,
hakusi kumuda asi kuti kumusvora nekushaya rukudzo kumufi iyeyo.
Mombe yehumai ndeye kupetera kana kuti kupa pasi, ropa rinenge radewuriwa naamai
pariri paku sunguka, hai regere kurehwa kana dayi kukazove rinhi. Kuti uyibvise tanga kuona kuti, ivo vauri kupa yavo yakabviswa here zvese neya amaivavo kusvika yaambuya vavo.
Kana dzisina kubviswa yako iyoyo hayi tambirwe nepasi, unenge uchipedza zvako nguva yako. Kana wayibvisa siya waona kuti vawapa vapfugama here, kuisvitsa kumidzimu yawapa yacho, zvakare rarapo usadzokere musi wakare hapana zvaunenge wagona, ukadzokera kwawabva musi wakare. Hayibviswe iri mari uchinzi tinozo kutsvagira mombe yacho, tsvaga navo kana uchiitengera ikoko uvape iri mombe inofamba.
Hazviperere pakuibvisa ikoko, asi kuti kana yazove nemhuru kana mbiri, kwoitwa anonzi madiro ekuchisvitsa kuvhu mombe iya, kureva kuti inozo urayiwa paine mbudzi zvakare
yemunongedzo. Kunyange ukati wavakuteedza zveverudzi rusingaite izvozvo hazvi tizike, nokuti ivhu rinenge richingoreva twaro nenzira dzakasiyana siyana, zvinosanganisira hurwere nekusagarawo zvakanaka. Zvinoramba zvingo kudzudza nekuti unenge uchi famba pariri.
Kana baba vako vakanga vasina kuyibvisa, ivo vasisiri vapenyu iwe mwana unefanirwa kuibvisira baba vako muzukuru. Ndakawona mumwe aka tozotanga abvisa yakanga isina kubviswa naasekuru vake kuna ambuya vabereka amai vaamai vake, ndokuzo bvisa yakanga isina kubviswa nababa vake kuti ipihwe ambuya vake kuti ikwanisike kutambirwa nepasi.
Mibvunzo nemhinduro zvinogoneka, ukanyora panzvimbo yekutumira mashoko iri mu website muno makare, ndokunge wakadzima pane zvandareva izvozvi. Tozonyererana zvakare svondo rinouya.\_\_.